Abanikazi Smartphones nezinqunjwana okungenani kanye wayizwa inkulumo ethi "ebhodini lokunamathisela." Ngokwesilinganiso isetshenziswa izikhathi eziningana ngosuku. Kodwa akubona bonke ngokugcwele ukuthi kuyini kukhona yokunamathisela in the "Android", ungayisebenzisa kanjani futhi kuphi.
Kungani sidinga yokunamathisela?
Kanye kwikhompyutha siqu, yokunamathisela kuletha abanikazi Smartphones kanye amaphilisi lula. Ukusetshenziswa Its ivumela ngokushesha ukudlulisela idatha bekhululeke kakhudlwana ekusingatheni ukwaziswa. Ngaphambi ubuza, iphi yokunamathisela in the "Android", kudingeka uqonde, yini umsebenzi wayo oyinhloko.
Okuwukuphela sesikhashana umsebenzi in Smartphones kanye amaphilisi - ukulondoloza umbhalo kanye nedatha kumemori. Izicelo eziningi futhi usebenzise analog nokuphathelene of ebhodini lokunamathisela ukugcina ulwazi: izingxenye ukulandelana kwevidiyo, amathrekhi alalelwayo, izithonjana, nokunye. Iphinde ikuvumela ukukopisha izinombolo zocingo, ibhithi inkhulumiswano ukudlulisa ukuba amawindi amasha.
Ezimweni eziningi, woza ebhodini lokunamathisela akunakwenzeka. Uhlelo lokusebenza "Android" engabondli abakubo kwakungenzeka lokhu. Kungezwe bakhumbule ucezu lolwazi ukuba egcinwe efonini uma nje it is kuphenduke ngenye. Kodwa njengoba idatha egcinwe kumemori ke uma uvala ifoni noma ithebhulethi yakho, zizolahleka.
Indlela ukwengeza umbhalo ebhodini lokunamathisela kuya "Android"?
Manje kwaba sobala lapho yokunamathisela ku "Android". Kodwa-ke uhlala ukuba baqonde indlela ukwengeza umbhalo, isithombe, ifayela.
Kuyinto pretty elula. Ukwengeza umbhalo ukuze inkumbulo yesikhashana, kumele afake isicelo touch eside ekuqaleni komugqa. Ngemva imizuzwana embalwa izimpawu isikrini intando ukuthi kulula ukulandela touch. Kuyadingeka umbhalo ufuna ukubeka phakathi izimpawu ezimbili. Okulandelayo, udinga ukulondoloza idatha. Ngenxa yale njongo, noma isiphi isikhala edingekayo ukubamba touch iDemo. Umbhalo sikopishelwe ebhodini lokunamathisela.
Ukugcina isithombe noma ifayela, njengoba umthetho, kuthatha touch eside iphrojekthi. Ngemva kwalokho pops up a menyu engaphansi, lapho uhlu khetha "Kopisha ebhodini lokukopisha".
Indlela ukufaka idatha kusuka yokunamathisela?
Uma idatha edingekayo ubekwe kusitoreji sesikhashana, akunandaba lapho yokunamathisela ku "Android". Manje kubalulekile ukuba baqonde indlela ukufaka umbhalo ukulondolozwa.
Ukuze uqale, kumelwe uya indawo lapho idatha kuzodluliselwa. Lokhu kungaba sombhalo, ibha yokusesha kusiphequluli, intambo umlayezo noma izilungiselelo contact. Ngokulandelayo, kusayithi oyifunayo siphela touch eside. Khona-ke umsebenzisi izokwethulwa imenyu okuzivelelayo ukuthi yenza ukufaka ulwazi. Zonke umbhalo noma olunye uhlobo idatha uzobe adluliselwe ku-ewindini elisha zinjalo.
Inani yokunamathisela ukuthi ikuvumela ukudlulisa idatha phakathi nesikhathi esifushane futhi ngaphandle nokulahlekelwa ukunemba. Ngokwesibonelo, ikheli lewebhu eside zinganikwa komunye umsebenzisi emizuzwaneni embalwa.
Abasebenzisi futhi ungakhohlwa ukuthi ngemva kokufaka ulwazi akusho zinyamalale kusukela sesikhashana. It izogcinwa khona kuze isipele elilandelayo noma ukuvala smartphone.
Kanjani I yokunamathisela ecacile ocingweni "Android"
Manje kukhona imibuzo engasekho. Sesiyazi ukuthi yokunamathisela enjalo ayekuyo. "I-Android" Ufaka nathi inselelo entsha: kanjani ukususa idatha basindiswe?
Kufanele uqale neqiniso lokuthi lesi senzo kungasizi ukwandisa nekusebenta yesistimu yokusebenza. Yonke imininingwane egcinwe kuyinto wamamegabhayithi ezimbalwa nje. Kodwa uma udinga ukuhlanza sesikhashana sisekhona, kuyadingeka angene sombhalo bese ubamba touch on isikhala esingenalutho.
Ezinguqulweni athile "Android" liyavela Uhlaka isikrini amachashazi amathathu ekhoneni eliphezulu kwesokudla. Umsebenzisi uzodinga uchofoze kubo bese ukhetha "lokunamathisela" bese - "Susa konke". Ngemva kwalokho, yonke imininingwane elondolozwe ayosuswa.
Uyini umphumela we-3D
Ucingo Jinga: izibuyekezo, izithombe
Pepper sauce Steak: zokupheka ekhaya
Izimiso ezisebenza we Transistor
Indlela ukubeka isithombe isithombe: obukhulu yobuciko enezithombe